जाडोमा घुँडा वा जोर्नी दुख्छ ? यी हुन् घरेलु उपचार विधि - Unity Khabar
जाडोमा घुँडा वा जोर्नी दुख्छ ? यी हुन् घरेलु उपचार विधि
✍️ खबर संवाददाता	 प्रकाशित मिति : ४ पुष २०७६, शुक्रबार ११:५०
दिन प्रति दिन जाडोयम बढ्दै गएको छ । यतिबेला जोर्नी तथा घुँडा दुख्ने समस्या बढ्न सक्छ । कतिसमय अवस्थामा त घुँडा दुखाईले सामान्य हिँडडुल गर्न समस्या हुन्छ । त्यसैले यस्तो पीडाबाट मुक्ति पाउनका लागि घरेलु उपचार विधी अपनाउँदा फाइदा पुग्छ ।
खुट्टा मर्किएको बेला नरिवलको तेल लगाएर मालिस गर्दा आराम मिल्छ । साथै घुँडाको दुखाईमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
रातो खुर्सानीको प्रयोगले घुँडाको दुखाईमा राहत प्राप्त हुन्छ । यसमा मौजूद केपसाइसिनले पेनकिलरको जस्तै काम गर्छ।